निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश नेपाली घरभित्रै सीमित छौं। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरू पनि धेरै घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। घामसँग साक्षात्कार हुन पाइरहेको छैन। यसले शरीरमा कतै भिटामिन ‘डी’को कमी त भइरहेको छैन ? चिकित्सकीय भाषामा ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’ भनिने यो समस्याले प्रायःलाई प्रभावित पारिरहेको डाक्टरहरू बताउँछन्।
सिधै ट्याब्लेट वा जिंक सेवन गर्नुभन्दा हर्बल मेडिसिनको उपयोग गर्न सकिन्छ। अमला, च्यवनप्रास, अश्वगन्धा सेवन गर्दा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी पाउन सकिन्छ।’ होम आइसोलेसनमा बसेका वा अन्य व्यक्तिले दैनिक रुटिन अनुसार खानपान र नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने डा. उपाध्यायको सुझाव छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट